Nahoana i Jesosy no natao Batisa? ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Nahoana i Jesosy no natao Batisa?
Nahoana i Jesosy no natao batisa? El Ny Batemy dia fihetsika avelan'ny olona hiala amin'ny fiainany araka an'izao tontolo izao hanaraka an'i Kristy. Araka ny teolojia dia manadio ny fanahin'ny ota mamela antsika hanomboka "fiainana vaovao" ny rano. Ho an'izay te hanaraka ny dian'i Jesosy dia ilaina io fombafomba io. Na izany aza,maninona Jesosy no natao batemy raha afaka tamin'ny ota?.
Mba hamahana io fanontaniana io dia ilaina ny mamakafaka ny andalan-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly izay mifandraika amin'izany. Ao amin'izy ireo no hahitantsika ny valiny.
1 Nahoana i Jesosy no natao Batisa?: Ny antony rehetra
1.1 Natao batisa i Jesosy mba hanambara ny momba azy
1.2 Natao batisa i Jesosy hanamarihana ny fiantombohan'ny asa fanompoany
1.3 Jesosy dia natao batisa ho ohatra ho antsika rehetra
Nahoana i Jesosy no natao Batisa?: Ny antony rehetra
Hevitry ny tena antony nanaovana batemy an'i Jesosy
Jesosy dia nataon'i Joany Batista batisa hanambara ny momba anao, hanamarika ny fiantombohan'ny asa fanompoanao ary ho ohatra ho anay rehetra. Jesosy dia tsy nanota ary tsy nila natao batisa mba hibebahana.
Jaona Batista nanao batemy olona mba hibebahany ny fahotany. Nanomana ny fon'ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy izy. Rehefa tonga hatao batemy Jesosy dia tsy nety i John Batista. Fantany fa i Jesosy no Mesia ary tsy nanota. SAINGY Nilaza taminy i Jesosy fa ilaina izany, mba hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Nanaiky i Joany Batista ary nanao batemy an'i Jesosy.
Araka ny voasoratra ao amin'Isaia mpaminany hoe:
Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha anao,
Iza no hanomana ny lalanao eo alohanao.
Feon'ilay miantso mafy any an'efitra:
Amboary ny lalan'ny Tompo;
Ataovy mahitsy ny lalan'izy ireo.
Jaona dia nanao batemy tany an-efitra ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka.
Marka 1: 2-4
Ary avy tany Galilia Jesosy dia nankeo amin'i Jaona teo amoron'i Jordana, mba hataony batisa.
Fa nanohitra azy i John ka nilaza hoe: Izaho no tokony hataonao batemy, ka hanatona ahy va ianao?
Fa Jesosy namaly azy hoe: Mandehana ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nandao azy izy.
Matio 3: 13-15
Natao batisa i Jesosy mba hanambara ny momba azy
Rehefa nivoaka avy tao anaty rano Jesosy dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina miendrika voromailala ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: "Ianao no zanako malalako; Faly anao aho ”. Jesosy dia nekena ampahibemaso ho Zanak'Andriamanitra.
Ary rehefa natao Batemy ny olona rehetra, dia natao batisa Jesosy; ary nivavaka, nisokatra ny lanitra, ary nilatsaka taminy ny Fanahy Masina, tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ianao no Zanako malalako; Faly anao aho.
Lioka 3: 21-22
Nanaiky an'io famantarana io i Joany Batista. Nampitandrina azy Andriamanitra fa rehefa hitany ny Fanahy Masina nidina tamin'olona, ​​dia Zanak'Andriamanitra io olona io. Rehefa natao batisa Jesosy dia nanamafy Andriamanitra fa izy no Mpamonjy nampanantenaina izay hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao.
I Joany koa dia nijoro ho vavolombelona ka nanao hoe: Nahita ny Fanahy midina avy tany an-danitra aho tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary tsy fantatro izy; Fa Ilay naniraka ahy hanao batemy amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay mahita ny Fanahy midina, na mitoetra eo amboniny, dia Izy no Mpanao Batisa amin'ny Fanahy Masina. Ary nahita azy aho, ary nanambara fa Zanak'Andriamanitra izy.
Jaona 1: 32-34
Natao batisa i Jesosy hanamarihana ny fiantombohan'ny asa fanompoany
Talohan'ny batisany dia niaina tamin'ny naha-olona mahazatra Jesosy, tsy nampianatra olona na nanao fahagagana. Mpandrafitra izy ary tsy nahasarika ny sain'ny olona firy. Ny Batisa dia nanamarika ny fiafaran'ny fotoanan'ny fitomboana sy ny fanomanana ary ny fiantombohan'ny asa fanompoana nataon'i Jesosy ampahibemaso.
Rehefa natao batisa Jesosy dia voamarina fa manana ny herin'ny Fanahy Masina izy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny batisany koa dia nanambara ny tanjon'ny asa fanompoanao: mifandraisa amin'ilay mpanota mibebaka ary zakao ny fahotantsika.
Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batemy ho an'i Kristy Jesosy dia natao Batemy ho amin'ny fahafatesany?
Fa niara-nalevina taminy tamin'ny fahafatesana isika tamin'ny batemy, mba ho tahaka ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray, no mba handehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao.
Romana 6: 3-4
Jesosy dia natao batisa ho ohatra ho antsika rehetra
Jesosy dia ohatra ho antsika amin'ny zavatra rehetra nataony. Natao Batisa izy mba hanehoana ny maha-zava-dehibe ny fibebahana. Ilaina amin'ny fibebahana ny fibebahana. Rehefa misy mibebaka amin'ny fahotany ka manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy dia tonga zanak'Andriamanitra izy ireo.
Hoy i Piera tamin'izy ireo: Mibebaha, ary aoka samy hatao Batemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianao handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina.
Asan'ny Apôstôly 2:38
Ny Batemy Kristiana dia manan-danja ihany koa amin'ny famantarana ampahibemaso ny fanolorantenany amin'Andriamanitra.
Ny batemy izay mifanandrify amin'izany dia mamonjy antsika ankehitriny (tsy amin'ny fanesorana ny fahalotoan'ny nofo, fa amin'ny filan'ny fieritreretana madio amin'Andriamanitra) tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay niakatra tany an-danitra, dia eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra; anjely, fahefana ary fahefana dia manaiky azy.
1 Petera 3: 21-22
Nasehon'i Jesosy fa nanolo-tena tanteraka hanao ny sitrapon'Andriamanitra izy. KOA Nanafatra ny batisan'ny olona tsirairay izay nanome toky fa hanaraka azy izy.
Koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina; mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiako anao; ary indro, momba anao isan'andro aho mandra-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amena.
Matio 28: 19-20
Izany no izy! Manantena izahay fa hanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity nahoana i Jesosy no natao batisa. Raha te hamaky vitsivitsy ianao izao torohevitra ara-Baiboly momba ny famelana heloka ny olona iray, manohy mizaha Discover.online.
Manao ahoana ny tontolon'ny fanahy araka ny Baiboly
Ahoana ny famelana olona araka ny baiboly